अमेरिकी ग्यास स्टेशनमा काम गर्दा कसरी ज्यान जोगाउने ? हेर्नुहोस् ज्यान जोगाउनेका टिप्स « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकी ग्यास स्टेशनमा काम गर्दा कसरी ज्यान जोगाउने ? हेर्नुहोस् ज्यान जोगाउनेका टिप्स
अमेरिकामा आएर नेपालीहरूले सुरूवात गर्ने र तरक्की गर्ने एक क्षेत्र ग्यास स्टेसन हो । तर त्यही ग्यास स्टेशनमा नेपालीहरु मारिने क्रम चर्को छ ।
कसरी मारिन्छन् नेपाली ?
अहिलेसम्मका घटना हेर्दा प्राय घटना रातमा भएका छन् र लुटेराहरूबाटै गराइएका छन् । यी दुई तथ्यको विश्लेषण गर्दा राती काम गर्नुपर्ने बाध्यता, राती सुरक्षाको पोख्त ब्यवस्था नहुने भएकाले लुटेराहरूको मनोबल बढ्नु, सुरक्षा उपायहरू अपनाउनेभन्दा पनि प्रतिवाद गर्ने प्रवृति हुनु र पैसा जोगाउने नाममा ज्यान माया मार्ने खालको गतिविधि नै यस्ता अप्रिय घटनाका मुल कारण देखिएका छन् ।
ग्यास स्टेशनमा काम गर्नु वा ब्यावसाय नै गर्न छोड्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक हुदैन । त्यसैले यस्ता घटना घट्न नदिन के गर्ने भन्ने नै यसको चुरो उपाय हो । पहिला त यस्ता घटनाहरू लुटेराबाटै हुने भएकाले लुटेराहरू किन आउँछन् भन्ने नै मूल प्रश्न हो । अहिलेसम्मका घटना हेर्दा धेरैमा व्यावसायिक लुटेराहरू नै संलग्न छन् । केहीमा लागू पदार्थका दुब्र्यसनी र खानकै लागि लुट्ने टापटिपे लुटेराहरू पनि संलग्न भएको पाइएको छ । केही घटनामा चाँहि एसियाली आप्रवासीलाई देख्नै नसक्ने जातिवादी अर्थात् रेसिस्टहरू पनि संलग्न भएको पाइएको छ ।
अमेरिकामा बन्दुक सहज पाइने भएकाले बन्दुके अपराधको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । त्यसमा पनि लुटि खानु एक किसिमको प्रोफेसन नै भएको अवस्था छ । केही समययता आप्रवासीमाथिको जातीय विभेद पनि बढ्दो छ ।
ग्यास स्टेशनमा मारिएका नेपाली रेशम बजगाई ।
विस्तृत रिपोर्ट भिडियोमा हेर्नुहोला ।
यस्तो अवस्थामा होसियारीपूर्वक सावधानी उपायहरू अपनाउनु नै उत्तम हुने देखिन्छ । त्यसका लागि ग्यास स्टेसन साहुहरूले कामदारलाई सबैभन्दा ठूलो कुरा ज्यान हो, पैसा हैन भन्ने सिकाउन जरूरी छ । सकेसम्म पैसा जोगाउने तर त्यस्तो अवस्था नआए ज्यानको जोखिम नलिने भन्ने सुरक्षा मुलमन्त्र कामदारहरूलाई दिनु नै अहिलेका लागि पहिलो सुरक्षा मन्त्र हुन सक्छ ।
स्टोरमा बुलेटप्रुफ काउन्टरको व्यवस्था गर्ने, मध्यरातमा कन्भिनियन्स पसल बन्द गर्ने र ग्यास स्टेसन मात्र चलाउने, नजिकको प्रहरीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने, आवश्यकताअनुसार ढज्ञज्ञ को प्रयोग गर्ने, सीसीटीभीलगायतका सुरक्षा सन्यन्त्रको व्यवस्था गर्ने र त्यसका बारेमा देखिने ठाउँहरूमा प्रष्टसँग लेखेर राख्नेफगायतका उपायहरू पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
मालिकले जे भने पनि कामदारले एउटा नेपाली उखान सधैभरी सम्झनुपर्ने हुन्छ। त्यो के भने अनिकालमा बीउ जोगाउँनु, हुलमुलमा ज्यान जोगाउँनु । रिसाउने, परिस्थितिको आकलन नगर्ने, सुरक्षामा लापरवाही गर्नेलगायतका ज्यान जोखिम बढाउने काम गर्नु हुदैन ।
टेक्सासको ग्यास स्टेशनमा मनिष पाण्डेको लुटेराले हत्या गरेका थिए ।
पहिले काम गर्ने, पछि किन्ने
अमेरिकामा रहेका नेपालीमध्ये धेरैले आफ्नो अमेरिकी जीवन ग्यास स्टेसनबाटै सुरू गर्छन् । जोखिमका लागि तयार रहने चरित्र, स्टोरमा क्यासियर भएर काम गर्न सक्ने पढाइ, आफुले भने जस्तो समयमा सहजै काम पाइने भएकाले पनि नेपालीका लागि सुरूवाती दिनमा ग्यास स्टेसन रोजगारीका एक गन्तव्य भएको छ ।
त्यसैमा काम गर्दागर्दै पूँजी, ज्ञान र अनुभव हासिल गरेपछि धेरै कामदारहरू कतिपय अवस्थामा त्यही स्टोरकै साहुसँग साझेदार भएर त कतिपय अवस्थामा अरू साझदार खोजेर पनि ग्यास स्टेसन खोल्न पुग्छन् । एउटा स्टोर भएपछि केही समयमा अरू थप्ने क्रम सुरू हुन्छ । यसो गरेर धेर नेपालीहरू एक हैन, दर्जनौ ग्यास स्टेसनका मालिक हुन पुगेका छन् ।
सयौं नेपाली मालिक, हजारौं नेपाली कामदार
अमेरिकाका ५० राज्यमै नेपालीका सयोैंको संख्यामा ग्यास स्टेसन छन् र सयोैको संख्यामा नेपालीहरू ग्यास स्टेसनका मालिक भएर तरक्की गरिसकेका छन् । नेपालमा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पति कमाएका मानिसको पैसा ल्याएर पनि अमेरिकामा ग्यास स्टेसन खोल्नेहरू छन् भनिन्छ। खासगरी राजनीतिक दलका नेता र कमाउ उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले आफन्तमार्फत् यस्तो लगानी गरिरहेको बताइन्छ ।
नेपाली ग्यास स्टेसन मालिकको त आधिकारिक तथ्यांक नभएकोे बेला काम गर्ने नेपालीको एकिन संख्या भन्न सकिने अवस्था छैन । वेटिङ जब अर्थात् अर्को राम्रो काम नपाउन्जेल गरिने कामका रूपमा समेत लिइने भएकाले ग्यास स्टेसनबाट अन्य जब स्टेसनतिर हिड्नेहरूको तरल संख्या पनि ठुलो छ । कति नेपाली ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेको एकिन तथ्यांक नभएकाले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
एक अनुमानअनुसार अमेरिकाको ५० राज्यमा हजारौको संख्यामा नेपालीहरू ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेका छन् । नेपालीहरूको बाक्लो आवादी रहेको टेक्सासमा मात्र पनि ठुलो संख्यामा नेपालीहरू ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेका छन् ।
कम्तीमा १४ नेपालीको मृत्यु
अमेरिकी ग्यास स्टेसनमा नेपालीका लागि अवसरको मैदान मात्र छैन, चुनौतिको पहाड पनि तेर्सिएको छ । खासगरी, सुरक्षाको प्रश्न अहम छ । यसै क्रममा केही नेपालीले ग्यास स्टेसनमै असामयिक मृत्यु पनि वरण गरिसकेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार सन् २००४ देखि २०१८ अर्थात् १४ बर्षमा कम्तीमा १४ नेपालीले ग्यास स्टेशन वा कन्भिनेन्स स्टोरमा काम गरिरहेको बेला ज्यान गुमाएका छन् ।
केहि दिन पहिला मात्र ओक्लोहामा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परी रचना श्रेष्ठ मुस्किलले बचेकी थिइन् । गम्भीर घाइते हुनुभएकी श्रेष्ठको उपचार भैरहेको छ । यसैगरी नेपालको गोरखाबासी रेशम बजगाईं सानो परिवारसहित अमेरिकोका भर्जिनियामा बसेर अमेरिकी सपना साकार पार्न खटिईरहनु भएको थियो । हप्तामा एक दिन मात्र काम गर्ने ग्यास स्टेशनमा गत महिना लुटेराले बजगाईको ज्यान लियो । यसबाट उनको अमेरिकी सपना त चकनाचुर भयो नै परिवार बिचल्ली भयो अनि सिंगो समाज नै स्तब्ध बन्यो । करिब एक बर्ष अगाडि मात्र अमेरिका आएका बजगाईको शोकमा सिंगो अमेरिकाको नेपाली समाज जुट्यो अनि लक्ष्यभन्दा सहयोग रकम जम्मा गरेर परिवालाई दियो । केही समयका लागि राहत रकमले परिवारलाई सहयोग गरे पनि श्रीमती र छोरीको जिवनमा बजगाईको अभाव सदैव भईरहनेछ ।
सन्को ग्यास स्टेशन जहाँ रेशम बजगाई मारिएका थिए ।
यी बाहेक ग्यास स्टेशनमा काम गर्दा लुटेराको कुटाईबाट घाईते हुने, कुटाई खाने या लुटिनेहरूको संख्या ठुलै छ । अमेरिकामा ग्यास स्टेसनमा दिनानुदिन सुरक्षा चिन्ता बढ्दो छ । व्यवसायको वीमा हुने भएकाले मालिकहरूलाई केही राहत हुने देखिन्छ । तर, अधिकांश कामदारको बीमा पनि नुहने भएकाले उनीहरूको जीवन र परिवारमा ठूलो ज्वारभाटा नै आउने गरेको छ ।